अाज भगवान बुद्द्काे जन्मदिन सबै जनाले पन्चशिल पालना गर्नु भइ, मणि मोन्लम, जप, दान सेवा, सहयोग गर्नु भएमा धेरै पुण्य फल प्राप्त हुनेछ।
यस बर्षकाे 2017 मे 10 तारिक बुधबारको दिन बुद्ध जयन्ती परेकोले सबै जनाले त्यो दिन पन्चशिल पालना गर्नु भइ, मणि मोन्लम, जप, दान सेवा, सहयोग गर्नु भएमा धेरै पुण्य फल प्राप्त हुनेछ।
हामीले बुद्धिष्ट महिनाको छेपा च्योङ्ङा अर्थात सबै १५ तारिक तिथिमा पुर्णिमा साथै त्यो दिनलाई शुभ दिन मानिन्छ। बिशेष गरी बुद्धिस्टको ४ महिनाको १५ तिथि अर्थत बैशाख पूर्णिमलाई दिनलार्इ बिशेष गरी अाज महत्वपूर्ण पुर्णिमा मानिन्छ। र त्यो महिनालाई सागा धावा महिना पनि भनिन्छ। तर बुद्धिस्ट क्यालेन्डर र नेपाली क्यालेन्डर को गन्ती मा अलिक फरक भएकोले सागाधावा एक महिना पछी पर्नु पुग्छ भने ३ बर्षमा फेरि बैशाख पुर्णिमा र सागाधावा संगै पर्छ। किन कि त्यसै पुर्णिामाको दिन गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको र त्यसै पुर्णिामाको दिन उहाँले बोद्धगयमा ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको र त्यसै पुर्णिमाको दिन बोद्धगयाको कुशेनगरमा उहाँको निधन अर्थात महानिर्बना हुनु भएको दिन हुनाले बिशेष गरी बैशाख पुर्णिमाको दिनलाई धेरै महत्वको रुपमा मानिन्छ।
"सिदार्था गौतम बुद्धको छोटो जिवनी र उपदेशहरु"।
हाम्रो देश नेपालको राप्ती नदीको किनारामा शाक्य जातिको कपिलवस्तु भन्ने राज्य थियो । यसको राजधानी कपिलवस्तु नगर थियो । शुद्धोधन यहाँको राजा हुनुहुन्थ्यो । महामाया देवी राजा शुद्धोधनकी महारानी थिइन।
राजा शुद्धोधन तथा महारानी महामायादेवीको विवाहित जीवनको धेरैदिनपछि मात्र महामायादेवी गर्भवती भइन । सुत्केरी हुने दिन नजिक आउँदा राजासित उनले माइती देवदह नगर जानको लागि अनुमति मागिन् । राजाले खुशीसाथ अनुमति दिई महारानी सवारी हुने बाटोघाटो पनि सजाउन लगाउनुभयो।
कपिलवस्तु र देवदह नगरका बीचमा लुम्बिुनी भन्ने बगैचा थियो। त्यहा बगैचामा शालवृक्षको र अरु रुख विरुवाहरुमा टम्म फूल फलेका थिए। भमराहरु फूलका रस लिइरहेका थिए । चराचुरुँगीहरु मधुर स्वर गुँजाई रहेका थिए । महारानी महामायादेवी लुम्बिनी बगैंचामा शुक्रवार, वैशाख पूर्णिमाको दिन पुग्नुभएको थियो । महारानीले त्यहाँको शितल छाँयामा केहिछिन डुल्न चाहिन् । तसर्थ लावालस्करलाई आज्ञा दिई त्यहाँ डुलि रहरनुभयो । धेरै बेर नबित्दै त्यहाँ महामायादेवीले एउटा शाल वृक्षमृनि एउटा पुत्ररत्न जन्माउनुभयो।
यसरी महामायादेवीले लुम्बिनिमा पुत्ररत्न जन्माउनुहुँदा सुसारेहरु तथा लावालस्करले साह्रै होसियारी साथ वहाँको देखभाल गरे । अनि कपिलवस्तु नगरमा नै फर्काएर ल्याए । आफ्नो पुत्रको मुख हेर्न पाएकोले राजा शुद्धोधन साह्रै खुशी हुनुभयो । अनि उहाँले माहामायादेवीको विशेषरुपले हेरविचार गर्न लगाउनुभयो।
कपिलवस्तु नगरको छेउमै रहेको पहाडमा धेरै ऋषिहरु बस्दथे । त्यसमा कालदेवल भन्ने एक बुढो ऋषिलाई राजा शुद्धोधन तथा कपिलवस्तुवासीहरु खुब मान्दथे । उहाँ राजा शुद्धोधनका पुत्र जन्मेको थाहा पाउनु भई पुत्रलाई हेर्न कपिलवस्तुको राजदरवारमा आउनुभयो।
राजा शुद्धोधनले आफ्नो राजकुमारलाई ऋषिबाट आशीर्वाद दिलाउन चाहनुभयो । तसर्थ राजकुमारलाई ल्याउन लगाई ढोगाउन खोज्नुहुँदा ऋणिले राजकुमार अति पुष्यवान भएको लक्षण देख्नुभयो । अनि ऋषि सारै खुशी भएर हाँस्नुभयो । तर फेरि अलि अलि गर्दै मुख निन्याउरो पार्नुभई आँसु बगाउन थाल्नुभयो।
राजा शुद्धोधनलाई यो देखेर आश्चर्य लाग्यो । ऋषिले भन्नुभयो ‘‘यो राजकुमारमा महापुरुषको लक्षण छ । अति पुण्यवान हुनुहुन्छ । अनि ठूलो ज्ञान पाई शास्ता हुनुहुनेछ । तर के गरुँ ? म अभागी छु । म अहिले नै बुढो भइसकेकोले वहाँको उपदेश सुन्न पाउनेछैन । यसकारणले म हाँसेको र रोएको हुँ ।” यति भनि ऋषि आफैले राजकुमारलाई दण्डवत गर्नुभयो । अनि राजा शुद्धोधनले पनि राजकुमारलाई दण्डवत गर्नुभयो।
राजकुमार जन्मेको पाँचदिन भयो। त्यसपछी विद्वानहरुले राजकुमारलाई ‘‘सिद्धार्थ” भनी नाम राखे । ‘‘सिद्धार्थ” को अर्थ आफूले चाहेको सिद्ध (पूर्ण) हुनु हो । ती विद्वानहरुले पनि राजकुमारमा शुभ–लक्षणहरु देखे । सबैले भविष्यवाणी गरे ‘‘यदि यो राजकुमार राज्यमा बस्नुभएमा पछि महान् सम्राट हुनुहुनेछ । तर दरवार छोडी प्रव्रजित हुनुभएमा विश्वभरका शास्ता हुनुहुनेछ ।” तर ती मध्ये कौडिन्य नामको एक ब्राह्मण विद्वानले ठोकुवा गरेर, ‘‘सिद्धार्थ कुमार ठूलो भएपछि सम्पूर्ण राज्य छोडी प्रव्रजित हुनुहुनेछ, संसारभरका महानतम शास्ता नै हुनुहुनेछ ।” भनी भने।
सिद्धार्थ ठूलो भएपछि राज्य छोडेर जाने कुराले राजा शुद्धोधन चिन्तित भयो। नामाकरण भएको दुईदिनपछि सिद्धार्थकी आमा महामायादेवीको देहान्त भयो । महारानीको देहान्त भएकोमा सबैले शोक गरे । शुद्धोधन राजाले सबभन्दा बढि शोक गर्नुभयो । किन भने महामाया देवी अति उच्चकुलीन थिइन् । स्त्रीहरु मध्येमा सर्वाधिक गुणवती थिईन । महामाया देवीको देहान्तपछि राजा शुद्धोधनले सिद्धार्थ कुमारको पालन पोषण गर्ने जिम्मा राजकुमारकी सानी आमा हुनुभएकी महाप्रजापति गौतमीलाई दिनुभयो । महाप्रजापति गौतमीले राजकुमार सिद्धार्थलाई आफ्नै छोरा जस्तै पालन पोषण गर्नुभयो । सिद्धार्थले आफ्नो आमाको मुख हेर्न पनि पाउनुभएको थिएन।
यसरी सानी आमा महाप्रजापति गौतमीको लालन पालनद्वारा राजकुमार सिद्धार्थ क्रमशः हुर्कनुभयो । उहालाई सिद्धार्थ गौतम नामले प्रसिद्ध हुनु भयो। बालक सिद्धार्थ गौतम आठ वर्षका हुँदा राजा शुद्धोधनले अनेक विद्यामा पारङ्गगत गुरुहरु दरवारमा लगाई राजकुमारलाई पढ्ने लेख्ने तथा गणित इत्यादि सिकाउन लगाउनुभयो । अनेक विद्याहरुमा निपुण गुरुहरुको निर्देशनमा बसेर सिद्धार्थ राजकुमार धेरै विद्यामा छिट्टै पारङ्गगत हुनुभयो । यसले गुरुहरु सहित सबैजना आश्चर्य चकित भए।
राजकुमार सिद्धार्थ आठ वर्षका मात्र हुनुभएको थियो। राजकुमार सिद्धार्थको मन साह्रै नरम र दयाले भरिएको थियो । उहाँ कहिल्यै कसैलाई दुःख दिनुहुन्नथ्यो । उहाँ कसैले अरुलाई दुःख दिएको हेर्न पनि सक्नुहुन्नथ्यो । उहाँ दुःखीको सेवा गर्न सधैं तत्पर रहनुहुन्थ्यो।
राजकुमार सिद्धार्थ झन गहिरो विचारमा डुब्नुभयो । उहाँले मनमनै सोध्नुभयो ‘‘जब यो संसारको यस्तो रीति रहेछ भने हामीले देख्ने राम्रा कुराहरुको पछाडी केही नराम्रा कुराहरु लुकेका छैनन् र ?” उहाँलाई अनुभव भयो ‘‘ म आनन्दसँग बस्न पाएता पनि संसारलाई महान दुःखले दबाईराखेको छ ।” उहाँ अझै सानो बालक हुनुभएता पनि यस्तो यस्तो विचारको सागरमा डुबिरहँदा बाहिरी कुराको केही अत्तोपत्तो नभएको मानसिक अवस्थामा पुग्नुभयो । अर्थात एकचित्त भई मनका कल्पना हटिई ध्यानको प्रथम अवस्थामा पुग्नु भयो।
यस्तो कुरो थाहापाई राजा शुद्धोधनको मनमा खलबली मच्यो ‘‘मेरो पुत्र अब आध्यात्मिक कुरोमा बिचारमग्न हुनथाल्यो । यदि यस्तो बिचारलाई नछोडाएमा सिद्धार्थ राज्य र दरबार छोडेर जानेछ ।” राजपितालाई पीर भयो। राज्यको उत्तराधिकारी पुत्र दरवारमा नबस्लान् भन्ने । तसर्थ राजपिताले राजकुमारको मन दरबारिया सुख सयलमा नै लगाई राख्नको लागि चाहिने हरेक उपाय गर्ने अठोट गर्नुभयो । सर्वप्रथम राजाले राजकुमारका लागि ३ वटा महलहरु बनाउन लगाउनुभयो ।
एक महल असल जातका काठबाट बनाइएको थियो । त्यसको भित्र सुगन्धित काठका फल्याकहरु बिछ्याइएका थिए । भित्रको हावापानी शीतऋतुको लागि लायक हुने गरि न्यानो पारिएको थियो । अर्को महल गर्मीऋतुको लागि अनुकुल बनाइएको थियो । यसभित्र भुईमा चिल्ला तथा चम्किला सिसंगमरमर बिछ्याईएका थिए । यसले भित्रको हावापानी शीतल हुन्थ्यो । तेश्रो महल असल खालका इंटाहरुबाट बनाएको थियो। वर्षाऋतुमा भारीवर्षालाई खप्न सक्नेगरि हरियो झिँगटीले छाइएको थियो। यी तीनै महलहरुका वरीपरी रमाइलो बगैंचा थियो । बगैंचामा पोखरीहरु थिए । ती पोखरीहरुमा सबै किसिमका रंगी विरंगी कमलका फूलहरु उमारिएका थिए।
समय बित्दै गयो । राजकुमार सिद्धार्थ बाल्य अवस्था पार गरि युवा अवस्थामा पुग्नुभयो । राजपिताले प्रवन्ध गरिदिएका अनेक रमाइला कुराहरुले पनि राजकुमारलाई गहिरो विचारमा डुब्नबाट रोक्न सकिएन। राजाले यो कुरा चाल पाउनुभयो । राजाले कुमारको चित्तलाई आनन्द र मस्तिमा बाँध्नको लागि गरेका आफ्ना सबै जुक्ति असफल भएको थाहा पाए । ‘‘राजकुमारको मनमा गृहत्याग गर्ने बिचार आउन नदिई दरवार मै भुलाईराख्नलाई एउटी राम्री कन्यासँग विवाह गरिदिने निर्णय गर्यो।
राजकुमार सिद्धार्थको विवाह यशोधरादेवीसँग धुमधाम गरिदिनु भयो। विवाहपछि उहाँहरु नवनिर्मित सुन्दर महलमा बस्नुभयो। यो महल राजपिताले आफ्नो राजकुमार तथा राजवधूलाई रमाईलो तथा आनन्दपूर्वक बसाउन युवाहरुको मनपर्ने सम्पूर्ण सुख–सुविधाले पूर्ण गरि बनाई दिनुभएको थियो । अब राजा शुद्धोधन यस्तो विचार गरि खुशी हुनुभयो ‘‘अब त मेरो राजकुमार मलाई तथा राजसिंहासनलाई त्यागेर सन्यासी बन्न जानेछैन।
उहाँ आफ्नो दरवारिया संसारभन्दा बाहिरी दुनियाँ हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। वहाँ हेर्न चाहनुहुन्थ्यो अरुहरुको जीवन कस्तो हुँदो हो । त्यो हुनाले उहाँले बारम्बार आफ्ना बुबा शुद्धोधनलाई बाहिरी दुनियाँ हेर्न नपाएको गुनासो पोख्नुभयो । राजा शुद्धोधनले आफ्नो राजकुमारको नगर घुम्ने चाहनालाई रोक्न सक्नुभएन । त्यसपछी बहिरी नगर वरिपरि सफा सुगर गरि विभिन्न किसिमको दुखहरु नदेखिने दृश्य बनाउनु लगए।
त्यसैबखत अचानक एकजना बूढो मानिस लँगडाउँदै घरबाट बाहिर आइपुग्यो । उसको कपाल फुलेको थियो । जीउमा झुत्रोमुत्रो लगाएको थियो । मुहार कोत्रिएको तथा चाउरी परेको थियो । आँखा अति कमजोर तथा आँसु र चिप्राले लट्पटिएको थियो । मुखमा दाँत एकओटा पनि थिएन । उ आफ्नो कुप्रिएको जीउ थाम्न दुबै हातले एउटा लौरो टेक्दै आएको थियो। यस्तो बूढो मानिसलाई देखेर सिद्धार्थलाई अति दुःख लाग्यो। सिद्धार्थले सोध्नुभयो ‘‘सबैलाई यस्तै हुन्छ र ? छन्दक ? तिमी, म, मेरा मुमाबुबा, मेरी पत्नी र हामी सबैजना उ जस्तो नै हुनुपर्नेछ र ?” छन्दकले जवाफ दियो ‘‘यस्तै हो हजुर । यस्तो हुनबाट कोही पनि बच्न सक्दैन । यो बृद्ध अबश्थ हो।
‘‘सिद्धार्थ कुमार फेरि अर्को पल्ट नगर भ्रमणमा जानुहुँदा एकजना मानिस रहस्यमय ढंगले धूलोमा लटपटिएर भुईमा छट्पटाईरहेको देख्नुभयो। मुख तथा जिउभरि राताराता खटिराहरुले भरिएर फोहर देखिन्थ्यो। आँखाहरु पीडाले फिरफिराउँदथ्यो । उठ्नको लागि दाँत किटि जीउ थाम्न कोशिस गरेता पनि हरेक पटक भुईमा नै ढल्दथ्यो।
सिद्धार्थ दया र करुणाका साथ तुरुन्त त्यो मानिसको नजिक पुग्नुभयो।
अनि राजकुमारले सोध्नुभयो ‘‘ हे छन्दक । यो मानिस किन यस्तो भएको।यसको साँस कस्तो भएको हो ? छन्दकले आएर बिन्ती गर्यो ‘‘हजुर । यसलाई नछुनुहोला । यो बिरामी हो । यसको शरीरभित्र भयानक रोग चर्को भएर साँस तान्न पनि गाह्रो भएको छ । उसको रगत बिषले भरिएको हुन्छ । पछि उसको साँस रोकिनेछ । अनि सिार्थले सोध्नुभयो ‘‘के अरु मानिसहरुलाई पनि यस्तो हुने गर्छ र ? म पनि यस्तो हुनेछु र ?”
‘‘यदि त्यो बिरामीसँग यसरी नजिकिएर लसपस हुनुभयो भने हजुरलाई पनि त्यो रोग सर्नसक्छ। ”छन्दकले भन्यो।
अनि छन्दकले औंल्याउँदै सिद्धार्थलाई भन्यो ‘‘उता हेर्नुहोस् त हजुर ।”
राजकुमार सिद्धाथले के देख्नुभयो भने एउटा समूह रुँदै गइरहेको थियो। त्यसका अगाडि चारजना मानिसहरुले घारोमा एउटा लाख लगिरहेको थियो।
सिद्धार्थको मनमा झन आश्चर्य लाग्यो, जब तिनीहरुले केही टाढा गइसकेपछि त्यो लासलाई चितामा राखी आगो सल्काइदियो । त्यो लास आगोले खाँदा पनि चुपचाप बसिरहेछ । सिद्धार्थले काँपेको स्वरमा छन्दकसँग सोध्नुभयो ‘‘ यो के हो छन्दक ? अरुहरुले आगो बालिदिँदा पनि त्यो मानिस किन चुपचाप लेटिरहेको होला ?”‘‘हजुर । त्यो मरेको मानिस हो।
राजकुमारलाई अचम्म लाग्यो । वहाँको मुखबाट बोली निस्केन । वहाँलाई लाग्यो, यो अजेय मृत्युले सम्पूर्ण प्राणीलाई दबाइराखेको बडो भयानक छ। सिद्धार्थ चुपचाप दरबारमा फर्कनुभई आफूले देखेका तथा अनुभव गरेका कुराहरुको बारे चिन्तन गर्नुभयो।
अर्कोचोटी राजकुमार सिद्धार्थ घोडा चढीकन उद्यानमा चहारी रहनुभएको बेलामा एकजना (भिक्षु) प्रव्रजितलाई देख्नुभयो । यसले पहेँलो गेरुवा वस्त्रै लगाएको थियो । राजकुमारले नियालेर त्यो प्रव्रजितलाई हेर्नुभयो । प्रव्रजितको मनमा शान्ति सुखले भरिएर शीतल भएको आभास वहाँले पाउनुभयो । वहाँले छन्दकसँग यो प्रव्रजित व्यक्तिको व्यवहार तथा आजीविकाबारे सोध्नुभयो । छन्दकले बिन्ती गर्यो ‘‘लोकका दुःखदर्द हटाउने उपाय खोज्नका लागि घरबार छोडेका यस्ता व्यक्तिलाई गृहत्यागी भनिन्छ ।” यो सुनेर राजकुमार सिद्धार्थको मन साह्रै प्रमुदित भयो
केहिदिन पछी यशोदारादेवीले एक पुत्र जन्मइन त्यस पुत्रको नाम राहुल राखियो। यस्तो अस्त व्यवस्त दृश्य देखेर राजकुमार सिद्धार्थको हृदयमा जन्मदेखि आएको वैराग्य जाग्यो । अनि वहाँले यस सारा झमेलाहरुलाई फाली यथार्थ सुख प्राप्त हुने कुरोको खोजीमा जाने निर्णय गर्नुभयो । अनि राजकुमार सिद्धार्थ कसैले पनि चाल नपाउनेगरि चुपचाप उठी विस्तारै कोठाबाट बाहिर निस्कनुभयो । छन्दकलाई आफ्नो मनपर्ने सेतो कन्थक घोडा तयार गरिल्याउन अह्राउनुभयो । अनि त्यही मध्यरातमा कसैले चाल नपाउनेगरि राजकुमार सिद्धार्थ राजदरबारबाट निस्कनुभयो।
एउटा नदिको किनारमा पुगेर आफ्ना लगाएका बस्त्र–आभरणहरु सबै उतारेर छन्दकलाई दिनुभई अह्राउनुभयो ‘‘यी वस्त्राभरणहरु र कण्ठक घोडा लिएर तिमी कपिलवस्तु नगर फर्क । मेरो विषयमा मातापितालाई खबर गर ।” यसरी शाक्यवंशीय राजकुमार सिद्धार्थले प्राणी मात्रको रोग, शोक र पीडामाथि विजय पाउने बाटो पत्ता लगाउन २९ वर्षको उमेरमा मातापिता तथा राज्य श्रीसम्पत्ति सबै त्यागेर (भिक्षु) प्रव्रजित हुनुभयो।
सिद्धार्थले अनेक तरहले कठोर ६ बर्ष तपस्या गर्नुभयो। अन्तमा वहाँले ‘‘ मनुष्य सहित अन्य प्राणीहरु जन्म मरणको भुमरीमा पर्नाको मूल कारण मोह तथा मायामय सुखप्रतिको आशसक्ति नै हो । यस्तो दुःखको जालबाट मुक्त हुने इच्छा छ भने हामीले सम्पूर्ण तृष्णा निरोध गर्नुपर्दछ ।” भन्ने कुरा आश्रवक्षय ज्ञानबाट स्पष्ट थाहा पाउनु भयो । वहाँ तृष्णा क्लेशबाट विमुक्त हुनुभयो । वहाँले ‘‘दुःखहरु कसरी उत्पन्न तथा निरोध हुन्छन” भन्ने समेत ज्ञान पाउनुभयो । यसप्रकार वैशाख पूर्णिमाको जुनेली रातमा सम्यक सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभई ३५ वर्षका भिक्षु सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त भइ बुद्ध हुनुभयो।
भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नु भए पछि सर्वप्रथम आफ्नो पाँच जन शिक्षाहरुलाई वणराशमा चार आर्यसत्यको बारेमा धर्म ज्ञान सुनाउनु भयो। त्यसपछि वाहाले क्रमशः ४५ बर्ष विभिन्न किसिमको ज्ञान, उपदेशहरु सर्वप्रा‍णीहरुलाई सिकाउनु भयो। र त्यसपछि वाहा ८० बर्षको उमेरमा भारात बिहरको कुशिनगरमा बैशाख पुर्णिामाको रात महानिर्वण प्राप्त गर्नु भयो।
भगवान बुद्धले हामी माजा धेरै ज्ञान र उपदेशहरु छोडेर जानु भएको छ, त्यसलाइ हामीले अप्नाउनु धेरै जरुरी छ। अनि मात्रै यो संसारमा शान्ति मुक्ती मिल्नु सकिन्छ नत्र नरक को दुखमा अबश्य दु:ख भोग्नु पर्नेछ।
वाहाले दिनु भएको पन्च शिल उपदेशको पलान मात्रै गर्न सके पनि धेरै ठुलो धर्म हुनेछ। यी हुन:-
१. प्रा‍णी हत्य नगर्नु।
२. चोरी नगर्नु।
३. झुठो नबोल्नु।
४. परस्त्री संग गमन नगर्नु।
५. मादक पदर्थ सेवान नगर्नु। आदि हुन।
दस अकुशल कर्महरु हुन।
१) शरीर ले गर्ने तीन:-
क) प्रा‍णी हत्य (ख) चोरी गर्नु (ग) ब्यभिचार।
२) वचन ले गर्ने चार:-
क) झुटो बोल्नु (ख) चुक्ली लाउनु (ग) अपशब्द बोल्नु (घ) प्रलाप।
३) मन ले गर्ने तीन:-
(क) लोभ गर्नु (ख) अपकार चिताउनु (ग) मृथ्यदृष्टि।
दश कुशल कर्महरु हुन:-
१) हिंसा त्यागेर प्राणीको प्राणरक्षा गर्नुपर्छ, त्यो शरिरको प्रथम कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले दिर्घायु र निरोगी हुनेछ।
२) चोरी गर्न त्यागेर दान दिनुपर्छ। त्यो शरिरको दोस्रो कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले धन सम्पत्ति सम्पन्न भइ चोर डाका लाग्दैन।
३) ब्यभिचार त्यागेर शील पालन गर्नुपर्छ। त्यो शरिरको तेस्रो कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले गृहिणी सुन्दरी र नराम्रो जबाफ नलगाउने, झगडा नगर्ने हुन्छ।
४) झुटो बोल्नु त्यागेर सत्य बोल्नुपर्छ। त्यो बचनको प्रथम कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले सबैले प्रशंसा गरि माया गर्नेछ्न।
५) चुक्ली लाउने त्यागेर झगडा परेकोसंग मिल्नुपर्छ। त्यो बचनको दोस्रो कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले ठुलो सानो सबैले आदर गर्नेछ्न।
६) अपशब्द बोल्ने त्यागेर प्रिय वचन बोल्नुपर्छ। त्यो बचनको तेस्रो कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले सधै शुभ खबर र प्रिय वचन सुन्नेछन।
७) प्रलाप त्यागेर भजन गर्नुपर्छ। त्यो बचनको चौथो कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले आफुले गरेको वचन खेर नजाने र सबैले आफ्नो कुरा पत्याउनेछन।
८) लोभी मन त्यागेर दान दिने मन गर्नुपर्छ। त्यो मनको प्रथम कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले आफुले सम्झेको काम र सबै मनकामना पूरा हुनेछन।
९) अपकारको चित्त त्यागेर उपकारको चित्त भावना गर्नुपर्छ। त्यो मनको दोस्रो कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले आफुलाई विभिन्न किसिमको हिंसा, बाधा बिग्न बाट मुक्त हुनेछ।
१०) मृथ्यदृिष्ट त्यागेर सम्यक् (राम्रो) दृष्टिको मनन गर्नुपर्छ। त्यो मनको तेस्रो कुशल कर्म हो। त्यस कर्मको फलले हामी सबैको मनमा राम्रो कुराको मात्रै सोच बिचार आउनेछन।
सुत्रमा:- हाम्रो सुख र दु:ख त कर्महरुबाट भएको हो भनी बुद्धले भन्नू भएको छ।
"सानो सानो पापहरुबाट पनि बाधा पार्दैन भनी (हेला) उपेक्षा नगर्नु, आगोको सानू झिल्काले पनि पहाड जत्रो परलको राश जलाइदिन्छ भनिएको छ।
"सानाे सानाे पुण्यहरुमा पनि धर्म हुदैन भनी (हेला) उपेक्षा नगर्नु, पानीको थोपा थोपा साँचेकोले क्रमशः ठुलो भाँडा भरिने छ भन्नू भएको छ।
"तोरिको एक दानाबाट रुख उम्रिंदा त्यसबाट हजारौं दाना फलिन्छ" त्यसैले पाप र धर्मको फल पनि त्यसरी नै फैलिनेछ भन्नू भएको छ।
"जरा औषधी भएमा बोट पनि औषधी, जरो विष भएमा बोट पनि विष" जस्तो कर्म उस्तै फल हाम्रो पछि लागेर आउनेछ।
यो सबै मनुष्य लोकमा गर्ने भएकोले हुदा यस ६ लोक को दु:खमा फस्ने गर्दछ। त्यसैले संसाररिक बस्तुहरु बादल र तुवाँलो जस्तो भएकोले त्यसप्रतिको धारणा नबनाउ।
यशकीर्ति सबै प्रतिध्वनी झै भएको हुँदा यशकीर्ती नकमाइ धर्म नै कमाउनु।
राम्रो लुघा इन्द्रेणी झै भएकोले पुरानो लगाउने अभ्यास गर्नु।
हाम्रो शरीर पिप,रगत र पूयको पोखरी भएकोले खानाको पछि लागि नपर्नु।
आभास मन शत्रुबाट उठ्ने भएकोले अरन्य जङ्गलमा सुत्नु।
भ्रान्तिको काडाले मनलाई बिझ्ने भएकोले समानताको आभ्यास गर्नु।
काम इच्छा सबै आफूबाट उत्पन्न हुनेहुदा आफ्नो मनको रक्ष गर्नु।
रत्न मणि आफुमा भएको हुँदा अन्न र धनको लागि बहिरी रत्नमा आसक्त नहुनु।
धेरै कुरा जगडाको बीउ भएकोले लाटो जसरी बस्नु।
मन नै उचित स्वभावको हुने हुदा खानाको पछि नदौडिनु।
प्रसाद मनबाट उपन्न हुने हुदा लामा गुरु र ईष्टदेवलाई बन्दना गर्नु।
एक स्थानमा धेरै बस्दा बुद्धमा पनि दोष देखिने हुदा एकै स्थानमा धेरै नबस्नु।
निम्न स्थानको व्यवहार गरि बडापनको अहङ्कार त्याग्नु।
समयले साथ नदिने हुदा समय मै धर्म साधना गर्नु।
यो जीवान पाहुना जस्तै भएकोले आराम गर्ने ठाउमा गारो लगाउने काम नगर्नु।
संसाररिक काम जे गरे पनि फाइदा नभएको हुँदा धर्म साधनाको आभ्यास गर्नु।
आफ्नो शरीर कीरा फटेंग्राले खाने अथवा कहिले अस्त हुने हो थाहा नभएको हुँदा यस जीवानको मोजमा अलमल नगर्नु।
आफान्त र मित्र रुखको चरा जस्तै भएकोले त्यसप्रती आसक्त नहुनु।
बिश्वासको श्रद्धा यो राम्रो जमिन जस्तो भएकोले क्लेशको खाल्डोमा नपर्नु।
महत्वपुर्ण चिन्तामणि रत्न जस्तो यो जीवान शत्रु रुपी रिसलाई नपठाउनु।
सदवचन वसन्त ऋतुको बर्फ माथिको घर जस्तो भएको हुदा यसलाई आपतिको दोष लाउने नगर्नु।
बज्रचार्य बिराजमान भएको बेला सदधर्म गर्न अल्छी नमान है मानव भन्नू भएको छ। यी सबै भगवान बुद्धको बाणि हुन।
अन्तमा भगवान बुद्दको आशिर्वादले सम्पूर्ण प्राणी जगतको भलो होस् , हामी सबैमा शान्ति बनियोस, सबैलाई सत्बुद्धि प्रदान गरुन, हामी सबैको बाधा बिग्न हटेर जाहोस, मनले चिताएको पूरा होस, र सबै मृत आत्माले चिर सुख शान्ती मिलोस। भन्ने कामना गर्दछु।।
"ॐ मुणि मुणि महा मुणिय स्वाहा"।।
लामा थुप्तेन योन्जन तामाङ्ग।